Wasaarada amniga oo beenisay in hub laga bixiyay xerada J.Gordan lagu iibiyo Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Wasaarada amniga oo beenisay in hub laga bixiyay xerada J.Gordan lagu iibiyo Muqdisho.
Hornafrik-Wasaarada amniga xukumadda fedraalka Soomaaliya ayaa beeniyay sax ahaan shaha hub la sheegay in laga bixiyay xerada tababarka ee Jeneraal Gordan ee magaalada Muqdisho.
Af-hayeenka wasaarada amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in warkaas uusan aheyn mid sax ah isla markaana ay loo haynin cadeymo muujinaya in hubkaas laga baxay xerada Janeraal Gordan.
Warbixin dheer oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters ayaa lagu sheegay in magaalada Muqdisho si caadi ah loogu iibinayo hub laga qaaday xerada ay dawlada Imaaraatka Carabtu ku tababartay askar Soomaali ah.
Wakaaladda wararka Reuters waxaa ay sheegtay ayadoo soo xiganaysa dad hubka ka ganacsada in suuqyo ku yaala magaaladda Muqdisho lagu iibiyay hub gaaraya 6 illaa 700 oo qori oo nooca AK 47 ah kuwaasoo ay wakaaladu sheegtay in ciidamo ka qaateen xerada Jen Gordon oo Imaaraatku maamuli jiray.